65 sano buu noqonayaa sanadkan? - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Tilmaamaha Guriga > 65 sano buu noqonayaa sanadkan?
Medicare Asalka ah iyo Faa'iidada Medicare
Baro farqiga muhiimka ah ee udhaxeeya Medicare Advantage iyo Asalka Medicare, iyo waxa ay adiga kaaga jeedinayaan fiidiyowgaan.
Hambalyo! Dhalashadaada 65aad ayaa soo socota.
Markaad bilawdo boggan cusub ee nolosha, xulashooyinkaaga caymiska caafimaadka ayaa isbeddelaya. Way adkaan kartaa in la ogaado tan kuugu habboon xulashada caymiska adiga, laakiin waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno.
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW) waa qorshe caafimaad oo aan macaash doon ahayn oo ay la socdaan koox khubaro ah oo leh rukhsad iyo shati la aqoonsan yahay. Waxaan kaala hadli karnaa xulashooyinkaaga oo aan ka jawaabi karnaa su'aalahaaga.
Wadada loo maro Medicare:
Soo ogow goorta aad xaq u yeelan doonto Medicare.
Medicare way dhib badan tahay. Waxaan ka jawaabnay xubnaheenna su'aalaha inta badan la is weydiiyo.
Qorshaha Medicare kasta isku mid ma aha. Jaantuskeenu wuxuu bixiyaa isbarbardhig jalleec ah.
Hubi aagga caymiska
Hubso in qorshaha aad rabto lagu bixiyo halka aad ku nooshahay.
Eeg khariidadaha caymiska
Wax kasta oo aad soo baratay, ku soo qaado qorshaha kugu habboon adiga!
Isku qor khadka tooska ah or telefoonka. Kooxdayada khabiirada ruqsada haysta ayaa kugula socon kara howsha.
U hel hal qorshe dhammaan baahiyahaaga daryeel caafimaad
Ma ogtahay in Medicare-ka Asalka ahi aanu daboolayn dhammaan baahiyahaaga caafimaad ee muhiimka ah?
Waa run: Aragtida joogtada ah, ilkaha, iyo daryeelka maqalka kuma hoos jiraan Medicare-ka Asalka ah. Xaqiiqdii, si aad uga hesho dhammaan daryeelka aad uga baahan tahay Medicare-ka Asalka ah, oo ay ku jiraan caymiska daawada laguu qoray, waxaad u baahan kartaa inaad isqorto afar barnaamij oo kala duwan.
Qorshayaasha Faa'iidada Medicare ee CHPW way ka duwan yihiin. Kuweena qorshooyinka oo dhan-ka ah waxaa ka mid ah:
Acupuncture iyo Daawooyinka Kale
La xiriir khubaradayada caafimaadka ee shahaadada si loo barto sida loo helo hal qorshe iyo hal kaar oo loogu talagalay daryeelkaaga oo dhan.
Ka dhig Medicare mid fudud oo ku saabsan hagayaasheenna bilaashka ah
Download mid ka mid ah tilmaamaha Medicare ee bilaashka ah si aad u hesho macluumaad dhameystiran, si fudud u dhig. Dheeraad ah, waad heli doontaa tilmaamo shaqsiyeed iyo xusuusin ku saabsan waqtiga kama dambaysta ah ee Medicare.
Hel hagitaannadaada lacag la’aanta ah ee Medicare
Bilaw qorshahaaga diiwaangelinta maanta
Dhib malahan goortaadu tahay 65th dhalashadu waa, waxaad bilaabi kartaa qorshaynta u wareejintaada Medicare hadda.